Nongedzo kumitambo yeParalympics
Mitambo yeParalympic mitambo inotambwa musambo yeMitambo yeOlympic, asi ndeyevatambi vane hurema hwepanyama uye hwekuona. kuremara.
Sir Ludwig Guttmann akatanga mitambo iyi muna 1948. Aida kutanga mutambo waisanganisira veterans kubva muHondo Yenyika II. Mukati memakore mashoma, veterans vanobva kune mamwe marudzi vakapinda mumakwikwi. Pakazosvika 1960, sarudzo yemitambo yakarongwa, uye makwikwi aimbove asina kurongwa akawana zita repamutemo reMitambo yeParalympic. Ivo Mitambo inoitwa makore maviri ega ega, aine ese echando uye ezhizha Mitambo inoitwa, uye inoitirwa mune imwecheteyo inomiririra guta nenzvimbo seMitambo yeOlympic.
Ikozvino pane mitambo makumi maviri neshanu akasiyana pachirongwa cheMitambo yeParalympic - 26 zhizha uye 21 chando. Mitambo yechando inosanganisira alpine uye kuyambuka nyika skiing, biathlon, wiricheya curling uye sled hockey, nepo mitambo yezhizha iine akawanda anozivikanwa kune maOlympic mafani emitambo, kusanganisira track & munda, kushambira, kuchovha, Mitambo mitatu yakanangana neMitambo yeParalympic. - wiricheya rugby, boccia uye goalball, mutambo wevatambi vasina kuona kana vasingatarise zvakanaka. Piri itsva mitambo, paratriathlon nechikepe, zvichaita yavo Mitambo yeParalympic kutanga muna 2016 muRio de Janeiro.
Vatambi vanopatsanurwa nehurema hwavo uye izvi zvikamu zvinomisikidzwa zvichibva pamutambo uri kutambwa. Iwo makwikwi emitambo anosanganisira amputee, cerebral palsy / traumatic brain kuipa/ sitiroko, wiricheya-users, bofu / kutadza kuona, uye les autres. Les autres ishoko reFrance rekuti "vamwe" uye chikamu ichi chinosanganisira vese vatambi vasingakwani mune mamwe mashanu mapoka. Vamwe vatambi vanozivikanwa veParalympic vanosanganisira, Oscar Pistorius, April Holmes, Erin Popovich, Rudy Garcia-Tolson, Matt Scott, Chris Waddell, Sarah Will naJessica Long. Zvino kuna Ragnhild Myklebust wekuNorway uyo anobata rekodhi yemenduru dzese dzakambohwinwa kumitambo yeParalympic yechando. Panguva yese yebasa rake, akahwina menduru makumi maviri nembiri, uye gumi nemanomwe acho aive egoridhe.
Kwemakore, pakave nekukakavara kushoma kwakamuka neMitambo yeParalympic. Muna 2000, vamwe vasiri-remara vatambi vanobva kuSpain vakapinda muMitambo uye vakatamba pachikwata chebhasikiti chevatambi vane hurema hwepfungwa. Izvi zvakakurudzira International Paralympic Committeeto kumisa zvese zvehungwaru remara vatambi kubva kumakwikwi eParalympic kusvika paongororo zvakare. Dare racho rakati raizoongorora izvi mushure meMitambo yeBeijing, asi hapana danho rekupedzisira ravepo akaita. Dzimwe gakava dzakamuka dzinosanganisira dambudziko rekushandisa zvinodhaka. Munguva yemitambo yeSydney muna2000, vatambi gumi nevaviri vakaedza kuvhenekwa nedoping, uye gumi veavo vaipinda mumakwikwi ekusimudza magetsi. Kunyangwe paine kupokana, iyo Mitambo yeParalympic inzira yakanaka kune avo vane hurema hwepanyama uye hwekuona kuti vapenye uye varatidze ukuru hwavo hwemitambo.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Paralympic kufamba, ndapota tarisa kune anotevera mawebhusaiti:
IPC - Webhusaiti yepamutemo yeInternational Paralympic Committee
Chikwata cheU.S. Paralympic - Peji peji rechikwata cheUS nevatambi vayo.
Paralympic Maonero - Chinyorwa nezvaAnn Cody, aimbove mutambi akaremara.
Mukana weKurota - MaParalympics akabatsira sei vasingaverengeki vemauto veterans kuzadzisa zviroto zvavo.
Paralympic Sport TV - Webhusaiti ine terevhizheni paralympic zviitiko uye mavhidhiyo.
Basic Information - Nhoroondo, kumashure, uye ruzivo rwekutanga pamusoro pemitambo yeparalympic.
Nyaya Dzemumhanyi - Bios uye nyaya dzevamwe vatambi vane paralympic.
makwikwi - Mumwe mutambo une sei akaita iyo mitambo inokwikwidza zvakanyanya kune akakosha mutambi.
Beyond Olimpiki Mitambo - MaParalympics anosvika sei kupfuura mutambo nemakwikwi uye nekubata zvechokwadi hupenyu hwevanhu.
2012 Mitambo yeParalympics Yezhizha- yakaitirwa muLondon, England
2014 Mitambo Paralympics Mitambo- yakaitirwa muSochi, Russia
2016 Mitambo yeParalympics Yezhizha- yakaitirwa muRio de Janeiro, Brazil musi waGunyana 7-18, 2016
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri ne 1800wiricheya; tinopa handcycles, mitambo mawiricheya, &mawiricheya emahombekombe.